Nei Uchifanira Kuzvidzivirira Garaji Gonhi
Roller Shutter Masuo
Vhura & Motors
Roller Masuo Accessories
Sectional panhongonya Masuo
Hardware & zvishongedzo
Prepainted kwakakurudzira Coils
Garage Masuo Gallery
Imwe Stop Service
A musuo garaji chinofukidza kupfuura hwomukova mumba mako, mukova insulated kuchabatsira kuti kuderedza kutapurirana kupisa kana mhepo inotonhora kupinda garaji yenyu. Izvi zvakakosha nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka:
(1) Kana garaji rako rakanamatira pamba pako, mweya mugaraji unogona kufamba nepasuo kunharaunda yako yekugara. Gonhi rakavharirwa garaji rinodzora kufambiswa kwemhepo kubva kunze kuenda mukati
(2) Kana iwe ukashandisa garaji rako semusangano, nyaradzo yako ichave iri pamberi pekutanga. Musuo wegaraji wakasungirirwa unobatsira kuchengetedza tembiricha mugaraji mukati mepakati penzvimbo yekupisa kana ichienzaniswa neyakaipisisa tembiricha yekunze.
(3) Kana garaji rako riri pazasi peimwe kamuri mumba mako, mweya unogona kufamba nepasiringi yegaraji kupinda muuriri hwekamuri pamusoro. Musuwo wakasungirirwa unochengetedza tembiricha mugaraji zvakadzikama kudzikisira kushanduka kwekushisa mukamuri pamusoro.
(4) Musuwo wegaraji wakasungirirwa kazhinji unonyarara uye une mukati unokwezva kupfuura musuo usina kuvharirwa.
Chii chinonzi R-Kukosha?
R-Kukoshachiyero chemafuta anopisa anoshandiswa mukuvaka uye indasitiri yekuvaka. Kunyanya, R-kukosha ndiko kupisa kwekushisa kupisa kuyerera. Vazhinji vagadziri vanoshandisa maR-kukosha kuratidza kushanda kwesimba kwechigadzirwa chavo. Iyi nhamba inotariswa zvichibva pakukora kweiyo kuputira uye ayo makemikari zvivakwa. Iyo yakakwira iyo R-kukosha nhamba, zvirinani iyo yekudzivirira zvinhu zvechinhu.
Bestar Model 5000 Series Garage Doors, ine R Kukosha 17.10, inogadzirwa ne3 dura rekuvaka (simbi + kuputira + simbi), inopa akasarudzika simba, simba kushanda, ngura kuramba uye kudzikisira ruzha. Iyo 2 "ukobvu hwe polyurethane kuputira uye tembiricha yekupwanya rabha inoita kuti iwo madhoo ave kupisa uye kutonhora kusagadzikana, nepo rurimi-uye-groove rakabatana rinobatsira kuvhara mhepo, mvura nesinou.
Garaji Masuo Zvishongedzo
Bestar Automatic Masuo Co., Ltd
Guta reRenqiu, Dunhu reHebei.
Jieyang Guta, Guang Dong Dunhu.
Copyright © Bestar Otomatiki Masuo Co, Ltd. Kodzero dzose Dzakachengetedzwa